FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA GREYHOUND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Greyhound
Nittany the Greyhound amin'ny faha-8 taonany manao fehikibo, vozon'akanjo ary baoty i Penn State University.
Lisitry ny Greyhound Mix Dogs
husky siberian mena sy fotsy
Alika lava sy mahia ny Greyhound. Ny loha dia lava sy tery, malalaka eo anelanelan'ny sofina, miaraka amina vava lava mihisatra. Tsy misy fijanonana. Ny sofina kely raozy dia tazonina sy aforitra ary somary voarasa rehefa faly izy ireo. Mainty ny lokon'ny maso. Ny hatoka somary arched dia lava. Ny tongotra dia lava ary ny tongony aloha mahitsy tsara. Mivelatra sy lalina ny tratra. Ny vodin-drambo lava miaraka amin'ny fiolahana somary miakatra. Ny palitao fohy sy tsara dia miloko amin'ny loko rehetra.
Mahery fo sy be fandavan-tena ny Greyhound. Manan-tsaina, milamina, mahasarika ary be fitiavana, ny toetrany matetika dia ambanin-javatra kely noho ny fitondran-tenany natokana ho an'ny olon-tsy fantatra ary na dia ny tompony aza. Greyhounds dia mahatsapa ny feon'ny olona iray ary tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy ireo, na izany aza tsy hamaly tsara ny famaizana henjana izy ireo. Ny tompon-trano dia mila milamina, nefa manana rivotra voajanahary. hifanerasera tsara hisorohana ny saro-kenatra. Toy ny fitsipika, dia malemy paika sy mahonon-tena izy ireo - sady hazakazaka no miseho tsipika. Ny ankamaroan'ny Greyhounds dia manana mpamily haza lambo. Maika voajanahary ho an'ireo alika ireo ny manenjika izay mihetsika haingana. Haingam-pandeha izy ireo ary ny sasany dia hamono saka sy biby fiompy hafa, na dia tsy maro an'isa aza (ny 20% eo ho eo fotsiny dia efa 'mazoto' manenjika haza ka tsy hanana ahiahy miaraka amin'ny biby kely). 10% eo ho eo no tsara avy hatrany satria ambany ny sain'ny haza haza, ary ny ambiny azo zarina hiala saka sy ny hafa biby fiompy kely ao an-trano irery. Mahalana izy ireo no mahita fahasarotana amin'ny alika hafa ary tsara amin'ny ankizy matetika, na dia tsy dia tia lalao milay aza izy ireo matetika, ary tsy ho safidy tsara ho an'ny ankizy kely mitady mpiara-milalao. Ao anaty, alika ireo dia alika sy tia fiaraha-monina ka azo lazaina ho kamo aza. Izy ireo dia mifamatotra mafy amin'ny olony manokana, manana tanjaka lehibe ary tsy mivalan-doha. Ny tsipika fampisehoana dia mazàna manana endrika vatana hafa noho ny tsipika fihazakazahana, ary matetika dia romotra kokoa. Ny tsipika fifaninanana dia namboarina ho an'ny fampisehoana, fa matetika ny vokatra tsara dia ny alika sariaka sy mivoaka izay mamorona biby fiompy mahafinaritra rehefa tapitra ny androny . Greyhounds dia tsy mailo manokana. Ny tsipika mampiseho dia somary mavesatra kokoa ary mitombo kokoa noho ny toetrany noho ny tsipika fihazakazahana, izay mitombo haingana. Na izany aza, ny tsipika fifaninanana dia mahatonga biby fiompy mahafinaritra ihany koa. Misy vondrona ana-jatony an-jatony manerana an'i Amerika Avaratra, Eropa ary Aostralia hametraka ireo alika malemy fanahy ireo rehefa misotro ronono. Greyhounds hazakazaka efa misotro ronono dia matetika tsy sarotra tranom-bahiny . Izy ireo dia efa crate voaofana Avy amin'ny làlana, noho izany dia tsy ela akory vao fantany fa tsy tokony 'hiditra' ao an-trano izy ireo. Ny Greyhound dia mila olona maotina, malemy paika nefa tompona be fitiavana iza no mahay mifampiresaka tsy tapaka ny fitsipiky ny trano . Greyhound izay mahalala ny toerany ao anaty fonosany ary izay antenaina aminy dia Greyhound sambatra.
Haavony: Lehilahy 28 - 30 santimetatra (71 - 76 cm) Vehivavy 27 - 28 santimetatra (68 - 71 cm)
Milanja: Lehilahy 65 - 80 kilao (29 - 36 kg) Vehivavy 60 - 70 kilao (27- 31 kg)
Ny tsipika sasany dia lehibe kokoa ary nahatratra ny ambaratonga 90-to-100 pounds (40 - 45 kg)
Mora volo . Aleo manome sakafo kely 2 na 3 azy ireo fa tsy iray lehibe. Mora tohina amin'ny zava-mahadomelina izy ireo, ao anatin'izany ny bibikely. Voalaza fa mora voan'ny hypothyroidism koa izy ireo, nefa inoana koa fa ny haavon'ny tiroidan'ny Greyhounds dia ambany kokoa noho ny ankamaroan'ny alika ary olona maro no mametraka azy ireo amin'ny fitsaboana tsy ilaina amin'ny hypothyroidism - izay manimba ny alika - araka ny tolo-kevitry ny vet tsy mianatra. Misy fomba iray tokana hanamafisana raha misy greyhound tena manana hypothyroidism, ary izany dia ny fanaovana tontonana tiroida feno (tontolon'ny tiroida an'ny fanjakana any amin'ny State University). Misy boky tena tsara nataon'i Cynthia Branigan, 'Adopting the Racing Greyhound', izay misy toko iray manontolo ao.
Ny Greyhound dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fanatanjahan-tena. Tsy dia mihetsika intsony izy io ao an-trano ary hisy tokontany kely. Ny greyhounds dia mora tohina amin'ny hatsiaka fa tsara amin'ny toetr'andro mangatsiaka raha mbola manao palitao any ivelany izy ireo. Aza avela hiala ity fika alika ity raha tsy amin'ny faritra azo antoka. Manana fanenjehana mahery vaika izy ireo ary raha mahita biby toy ny a bitro mety hiainga fotsiny izy ireo. Haingam-pandeha izy ireo ka tsy ho azonao.
boston terrier omby alika mifangaro
Ny greyhounds izay tazomina ho toy ny biby fiompy dia tokony hanana fotoana matetika handosirana malalaka amin'ny tany malalaka amin'ny faritra azo antoka, ary koa isan'andro mandeha , izay amboarina ny alika eo anilany na ao ambadiky ny olona mitazona ny firaka. Ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana ary izay mpitondra dia tokony ho olombelona. Greyhounds dia tia fahazarana mahazatra.
Miovaova be ny haben'ny fako amin'ity karazany ity. Avy amin'ny alika kely 1 ka hatramin'ny 12 miaraka amin'ny salan'isa 8 teraka tamina fako iray.
Ny palitao malama sy lava volo dia tena mora taovolo. Manosotra sy miborosy tsotra fotsiny amin'ny borosy mafy volo ary esory ny shampoo maina raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Io karazany tena taloha io no alika haingana indrindra eto an-tany ary afaka mahatratra 65 kilaometatra isan'ora. Ny sary sokitra Greyhound dia hita tao am-pasana tany Egypt nanomboka tamin'ny 2900 al.f.i. Heverina fa avy tamin'ny Sloughi Arabo ary nentin'ny mpivarotra tany Angletera talohan'ny taona 900 AD. Ny karazany dia nentin'ny Espaniola mpikaroka tany Etazonia voalohany tamin'ny taona 1500. Iray amin'ireo alika voalohany naseho tamin'ny fampisehoana alika ireo. Ny fitrandrahana voajanahary ataon'ny Greyhound dia ny bitro sy ny bitro, na izany aza, dia nampiasaina koa izy mba hihaza amboadia, serfa, amboahaolo ary lambo dia. Ny hafainganam-pandehan'ilay alika sy ny masony mahiratra dia nanampy azy hivoatra tamin'ny asany. Afaka nanenjika sy nisambotra ny vavaka ny alika nefa tsy nijanona sasatra. Androany dia misy karazany roa ny Greyhounds izay ampitomboina: Asehoy ny tsipika, izay mifanaraka amin'ny fenitra voasoratra sy ny hazakazaky ny hazakazaka, mitombo haingana. Rehefa avy nisotro ronono tamin'ny hazakazaka fifaninanana dia matetika no potika ireo alika ireo. Miaraka amin'ny ezaka feno fanoloran'ny Greyhound Rescue ity fomba ity dia nihena be ary ny Greyhounds malemy paika indrindra dia trano no hita. Ny Greyhound dia neken'ny AKC tamin'ny taona 1885. Ny talenta an'i Greyhound dia misy ny fihazana, ny fahitana, ny fiambenana, ny hazakazaka, ny hakingana ary ny fisintomana.
Atsimo, AKC Hound
Dinasti Xqisite Ypsylon aka Lena, sary natolotry ny Magda Kruszewska, Polonina
Dynasty XQqisite Ypsylon aka Lena, sary avy amin'ny Magda Kruszewska, Polonina
Snowy the Greyhound amin'ny 2 taona— 'Snowy dia alika hazakazaka taloha. Noraisina ho zanaka natsangana izy satria tsy nandresy tamin'ny hazakazaka. '
Lexy ilay vehivavy Greyhound purebred amin'ny 3 taona. Voaofana amin'ny hazakazaka izy fa tsy nifaninana mihitsy. Noraisin'ny tompony ankehitriny izy avy tao amin'ny toerana fanavotana alika hazakazaka.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Greyhound
Sary Greyhound 1
Mahomby amin'ny fananganana alika mpamonjy
Alika Greyhound: Sarivongana Vintage azo angonina
Chihuahua sy pitbull Mix sary
ohatrinona ny lehibe pyrenees
pomeranian maltese shih tzu mix
alika mixer retriever volamena
alika inona no atao hoe chiantaraie
ohatrinona ny vidin'ny fizarana cesarean alika